मनाङे मन्त्रीपदबाट पदमुक्त - नेपालबहस
मनाङे मन्त्रीपदबाट पदमुक्त
| १०:२३:३६ मा प्रकाशित
२८ जेठ, काठमाडौं। प्रदेशशभामा विश्वासको मत लिन नसकेक गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङ् दिपक मनाङेलाई पदमुक्त गरेका छन् । सरकारका मन्त्री भएर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन मनाङे हिजो प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नभएपछि गुरुङ्गले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन ।
मुख्यमनी गुरुङ्गले मन्त्री मनाङेले समालेहो मन्त्रालय आफैं सम्हाल्ने जानकारीसहित मनाङेलाई पदमुक्त गरेको विषयमा उनले प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार कामचलाउ बनेको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न ४ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु ११ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? २० मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते २८ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ३३ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ४१ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ४२ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ४५ मिनेट पहिले
पक्की पुल नभएपछि अस्थायी पुलबाट आवतजावत ५३ मिनेट पहिले
पशुपालनबाट आयआर्जन वृद्धि गराउन ‘एक घर एक पशु बीमा’ कार्यक्रम लागू ५८ मिनेट पहिले
चीनसँग १७५३ मेट्रिक टन सुन सञ्चिती ७ दिन पहिले
२० बर्षिया बुहारीमाथि महिनौंदेखि ससुराको बलात्कार ! ९ महिना पहिले
आइतबारदेखि तिलोत्तमाका विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन हुने ७ महिना पहिले
चन्द्रमाको सतहबाट झण्डै ४० वर्षपछि माटो र ढुंगाको नमूना संकलन ६ महिना पहिले